မမရယျ – My Blog
မစေိမျးသညျ ညီမ အငယျဆုံး မညေို က သူ့ယောကျြား ဦးဆနျနီကွီးက ပနျးသနေတောမို့ သူနဲ့ မအိပျတာ ကွာပွီ ဆိုပွီး ညညျးပွခဲ့ဘူးသလို ညီမ အလတျ မနှေောငျး ရဲ့ ယောကျြား သကျထှေးအောငျက မနှေောငျးက သူ နဲ့ မအိပျတော့တာ ကွာပွီလို့ ပွောပွတာကိုလညျး ကွားခဲ့ရသညျ ။ မစေိမျးလညျး မအံ့သွပါဘူး ။ လူတှေ အသီးသီးဟာ ကိုယျ့ဇာတျလမျးနဲ့ ကိုယျ ရှိနကွေတာဘဲလေ ။ လူတှကေ ကိုယျ့အတှငျးရေးကို ထုတျမပွောကွလို့ပါ ။ သူ့ဟာနဲ့သူ အခကျအခဲတှေ ရှိကွစမွဲပါ ။ မစေိမျး ဆိုရငျလညျး ယောကျြား ဦးဗလမောငျတငျနဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို နမေ့အိပျညမအိပျ ကွိုးကွိုးစားစား လုပျခဲ့ကွတာ တျောတျောလေး ကွီးပှားလာခဲ့ကွတယျလို့ ဆိုရမယျ့အခြိနျ ဦးဗလမောငျတငျသညျ ဇာတိပွလာသညျ ။
မစေိမျးက အလုပျတှေ ရှုပျနတေဲ့အခြိနျ သူက သမီးအရှယျ မျောဒယျလေးတှနေဲ့ ကှယျရာမှာ ကဲနေ သညျ။ အစပိုငျးမှာ မစေိမျး မသိခဲ့ ။ သူက နံမညျကွီးခါစ ရုပျရှငျဗီဒီယို မငျးသမီးလေး တယောကျကို စှဲလနျးသှားခဲ့ပွီး သိနျးတသောငျးခှဲတနျ တိုကျတလုံးကို ဝယျပေးလိုကျတော့မှ ပတျဝနျးကငျြမှာ နံမညျကွီး သတငျးကွီးသှားပွီး မစေိမျး သိသှားရသညျ ။ မစေိမျးနဲ့ ဦးဗလမောငျတငျနဲ့လညျး အိမျထောငျသကျ ကွာလာပွီး သားတှေ သမီးတှလေညျး ကွီးလာကွတဲ့အ ခြိနျ လငျမယား အတူတူ တကုတငျထဲ အိပျကွပမေယျ့ လိငျဆကျဆံတာ မရှိတော့တာ ကွာခဲ့ပွီလေ ။
ယောကျြားတှဟော ဖှဲတဆုပျနိုငျတဲ့အထိ ကာမရာဂစိတျတှေ ရှိကွသညျ လို့ စာတှမှော ရေးကွတာကို ဖတျဖူးခဲ့ရတော့ အသကျ ၆၀ကြျောအရှယျ သနျတုံးမွနျတုံး ဦးဗလမောငျတငျသညျ ကာမဆာလောငျမှတျသိပျတဲ့ ဒါဏျ ကို မခံနိုငျဘဲ ငယျရှယျတဲ့ နုပြိုတဲ့ မိနျးကလေးတှနေဲ့ ရှုပျတော့တာပေါ့ ။ သူလို အဖိုးကွီးက ရုပျလညျး ပွမစား နိုငျတော့ ငှနေဲ့ဘဲ ပေါကျရတော့တာပေါ့ ။ အရေးထဲ ဘျောဒါတှကေို ကွှားလုံးကလညျး ထုတျခငျြတော့ သနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့ ဆငျးရဲသူလေး တယောကျကို နညျးနညျးပါးပါးနဲ့ ကီပငျ လုပျထားနိုငျရကျနဲ့ လူသိမြားတဲ့ နံမညျရခါစ မငျးသမီးကို သှားလုပျတော့ ငှတှေေ သနျးပေါငျးမြားစှာ ပုံပေးရတော့တယျလေ ။
မစေိမျးလညျး သူ့ကို ကောငျးကောငျး ဆဲပဈခဲ့သညျ ။ “ စောကျပတျဟာ စောကျပတျပါ..ကိုဗလ…ရှငျ သိနျးတသောငျးကြျော ရငျးစရာ မလိုပါဘူး.. ဆငျးရဲ နှမျးပါးတဲ့ မိနျးကလေးတှထေဲမှာ တျောရုံနဲ့ ချေါအိပျလို့ရမယျ့ဟာတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ…စျောရူးကွီး…တျောရုံဘဲရုးဖို့ကောငျးတယျ…ရှငျကငှတှေေ ဒီလို ပုံပေးရအောငျ အဲ့ကောငျမ စောကျပတျက ဘာမြား ထူးနလေို့လဲ..အရူးကွီးရဲ့…..” ဦးဗလမောငျတငျ တငျ သားသမီးတှေ ရှေ့ အိမျအကူတှေ ရှမှေ့ာ အဲလို အဆဲခံရတော့ တအား ရှကျသှားသညျ။ မစေိမျးတို့ လငျမယား ကှဲသလိုတောငျ ဖွဈသှားသညျ ။
ဦးဗလမောငျတငျ လညျး မငျးသမီးလေးနဲ့ အတိအလငျး သှားနလေိုကျသညျ ။ မစေိမျးလညျး သူနဲ့ တရားဝငျကှဲဖို့က ပိုငျဆိုငျတာတှေ ခှဲကွဖို့က ရုတျတရကျ မလှယျသေးတာကွောငျ့ မစေိမျးနဲ့ လကျရှိ လုပျငနျးတှကေို သားကွီး အကူအညီနဲ့ ဆကျ လုပျနသေညျ ။ မစေိမျးလညျး အသကျ ငါးဆယျကြျောလာတော့ လိငျကိစ်စကို အားအရမျးနညျးလာခဲ့တယျ ဆိုပမေယျ့ တခါတခါတော့ စိတျထတာ ရှိတာပေါ့ ။ ဦးဗလမောငျတငျက ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာမဲ့ပွီး သူ လုပျခငျြတာ လုပျတော့ စိတျထဲမှာ မခံခငျြစိတျ ဖွဈမိသလို အိုးရှဲ့ရငျ စလောငျးလညျး ရှဲ့မယျ ဆိုသလို သူ့ကို အရှဲ့တိုကျခငျြမိခဲ့သညျ ။ မစေိမျး လညျး မစေိမျး သှားနကြေ ဂငျြမျက ထရိနျနာ ခြာတိတျကောငျလေးကို ကွညျ့ပွီး စိတျလာမိသညျ ။
ကောငျလေးက အားကစား သမားလေးမို့ ကိုယျလုံး အဆကျအပေါကျက ကဈြကဈြလဈလဈနဲ့ ယောကျြား ပီသလှနျးနတေော့ အရငျထဲက သူ့ကို ကွညျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ ကွညျ့မိခဲ့တာပေါ့ ။ နောကျပိုငျး သူက အနျတီ အရှယျကွီးကို မမ မမနဲ့ တအားဖါးတော့ သူနဲ့ စကားပွောရတာကို သာယာမိခဲ့သညျ ။ ဦးဗလမောငျတငျ ကလညျးထငျရာဆိုငျးသှားတော့ သူတောငျ လုပျသေးတာ ငါက ဘာလို့ လုပျလို့ မရလဲ ဆိုတဲ့ မခံခငျြစိတျနဲ့ ဒီ မိုကျကယျ ဆိုတဲ့ ကောငျလေးရဲ့ နညျးပွ အကွံပေးမှုတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ပွငျးပွငျးထနျထနျလုပျ အစားလညျး လြော့တော့ မစေိမျးလညျး ဝိတျတှေ ကပြွီး တျောတျောဘဲ ကွညျ့ကောငျးလာသညျ ။ မိုကျကယျကလညျး မစေိမျးက အရမျးနုတယျဘာညာနဲ့ ပငျ့ပေး မွှောကျပေးသညျ ။
မစေိမျးလညျး မိုကျကယျကို စိတျယိုငျပွီး မတှဘေဲ့ မနနေိုငျတော့တဲ့ အခွအေနေ ဖွဈလာသညျ ။ လူခငျြးတော့ ဘာမှ မဖွဈသေးဘူး ။ ဂငျြမျကနေ အပွနျမှာ သူနဲ့ သဈသီးဖြျောရညျ အတူတူ သှားသောကျကွ….ဆိုငျမှာ သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျး အပွနျအလှနျ ပွောပွကွနဲ့ ရငျးနှီးသထကျ ရငျးနှီးလာခဲ့ကွတာပေါ့ ။ တနေ့ အလုပျမှာ သားကွီးက သူ့အဖေ ဦးဗလမောငျတငျ တယောကျ ထိုငျးနိုငငံ ဖူခကျ ကမျးခွမှော ဟို မငျးသမီးလေးနဲ့ အရှကျမရှိ ကဲပွနတေဲ့ ဓါတျပုံတှကေို လာပွသညျ ။ သားကွီးကတော့ သူ့အဖေ လုပျရပျတှကေို မကွိုကျပမေယျ့ သိပျပွီး စိတျဆိုးတဲ့ပုံတော့ မရှိပါဘူး ။ မစေိမျးကတော့ တျောတေျာ့ကို ခံပွငျးသှားခဲ့သညျ ။ နောကျတနမှေ့ာ မိုကျကယျကို မမနဲ့ လြောကျလိုကျနိုငျမလား လို့ မေးလိုကျတော့ မိုကျကယျက မမနဲ့သာဆိုရငျ ဘယျဘဲ ဖွဈဖွဈ လိုကျမယျ လို့ ပွောလိုကျတော့ မစေိမျးလညျး အရမျး သဘောကသြှားပွီး ဂငျြမျက အပွနျ ခြောငျးသာကမျးခွကေို သူနဲ့ ထှကျသှားလိုကျကွသညျ ။ အိမျကိုတော့ အလုပျတှေ ရှိလို့ နပွေညျတျောကို သှားမယျ လို့ ဖုနျးဆကျ ပွောလိုကျတာပေါ့ ။
မစေိမျးလညျး အိမျထောငျကြ ပွီးမှ စိတျတှေ ပထမဆုံးအကွိမျ တအားတအား ပွနျထကွှတာ…။ ကားထဲမှာ မိုကျကယျနဲ့ လကျခငျြး ပှတျသပျ ဆုပျကိုငျကွတာနဲ့တငျ မစေိမျး အရညျတှေ ရှဲနပွေီလေ ။ မိုကျကယျကလညျး မစေိမျးက သူ့အတှကျ ဖုနျးဝယျပေး လကျတော့ ဝယျပေး နောကျဆုံးပျေါ အားကစား ဝတျစုံတှေ ဝယျဆငျနလေို့ မစေိမျးကို တအား ပငျ့မွှောကျသလို မစေိမျး စိတျကွှအောငျလညျး ဟိုကိုငျဒီပှတျ နဲ့ ဆိုတော့ ခြောငျးသာကိုလညျး ရောကျရော ဟိုတယျ အခနျး ယူလိုကျကွပွီး အခနျးထဲ ဝငျတယျ ဆိုတာနဲ့ မိုကျကယျနဲ့ မစေိမျး အငမျးမရကို ဗငျြးကွတော့တာဘဲ ။ ဦးဗလမောငျတငျ လို ဘိုကျပူပူ ခါးကုနျးကုနျး ဘဲကွီးနဲ့ စာမလိပျ စိတျမလာ သလောကျ မိုကျကယျလို သနျသနျ မာမာ လူငယျလေးနဲ့ တှကွေ့ပွီ ဆိုတော့ မစေိမျးလညျး အရမျးကို စိတျတှေ ထနျပွီး စိတျလှတျကိုယျလှတျတှေ ဖွဈသှားရသညျ ။ သူက အဝတျတှေ ခြှတျလိုကျတာနဲ့ ဦးဗလမောငျတငျလို ပုံပကျြကွီး မဟုတျတော့ မစေိမျး တကယျ့ကို ကွှသှေား ပွီး သူ့ရှညျလမြော တုတျတုတျကွီးကို ရလေညျဘဲ မှုတျပေးမိလိုကျသညျ ။
သူကလညျး မစေိမျး ပါးစပျထဲကို ကော့ကော့ထိုးသညျ ။ သူ့ဂှေးစိနှဈလုံးဆိုရငျ မစေိမျးလညျပငျးကို တဖတျဖတျနဲ့ လာရိုကျမိနသေညျ ။ သူ့ပါးစပျကလညျး “ အားအား…အီးအီး…..” နဲ့ အျောညညျးနပွေီး မစေိမျးနှုတျခမျးထူထူတှထေဲကို တစှပျစှပျနဲ့ ထိုးညှောငျ့သညျ ။ တျောတျောလေး ဒီလို မှုတျကွဆောငျ့ကွပွီးတော့ မစေိမျးကို ကုတငျစောငျးမှာ ကုနျးခိုငျးပွီး သူ့ဟာကွီးနဲ့ မစေိမျး အဖုတျထဲကို စသှငျးတာ မစေိမျးလညျး မလုပျတာ ကွာလို့ အဖုတျက ပွနျကွပျနပွေီး အသညျးအသနျ အျောဟဈရတဲ့အထိ မဆနျ့မပွဲကွီးတှေ ဖွဈပွီး သူက အကွမျးဖကျပွီး ထိုးဆောငျ့တာ တကယျ့ကို ပှဲကွမျးသှားခဲ့သညျ ။ မိုကျကယျ့ရဲ့ လီးက လုံးပတျက တျောတျော တုတျသညျ ။ မစေိမျး ဒီလောကျ အရညျတှေ ရှဲနတောတောငျ တငျး တငျးကွပျကွပျနဲ့ တထဈထဈ ပှတျတိုကျ ဝငျသှားတာ အကွောပေါငျး တထောငျ စိမျ့သှားရလို့ မစေိမျးလညျး တအား အျောလိုကျမိသညျ ။
မိုကျကယျဟာ ရုပျကလေး သနားကမားနဲ့ ပါးစပျက တျောတျော ကွမျးသညျ ။ “ တောကျ..ကောငျးလိုကျတဲ့ စောကျပတျ…ရှီး…….မမ စောကျပတျကို သှားလရော တပါထဲ ချေါသှားခငျြတယျ..မမ ရယျ…လှလိုကျတဲ့ စောကျပတျ….ကနြျော စားမယျနျော…..” ဆိုပွီး တတှတျတှတျနဲ့ ညဈညဈပတျပတျတှေ ပွောဆိုပွီး စောကျပတျကို ကွိုကျတယျ ကွိုကျတယျနဲ့ စအိုပေါကျကို မကျြစောငျးထိုးနသေညျ ။ ဒျေါဂီ စတိုငျ လုပျနတေဲ့ အခြိနျ သူ့လကျမက မစေိမျးရဲ့ စအိုပေါကျလေးကို မသိမသာနဲ့ ကလိနသေညျ ။ “ ဟိတျ မိုကျကယျ….အနောကျပေါကျတော့ မလုပျနဲ့ကှယျ…တျောကွာ မမ နောကျပေါကျ ကှဲသှားလို့ လမျးလြောကျလို့ မရဘဲ အရှကျကှဲနအေုံးမယျ…..” ဒီလို ပွောလိုကျတော့လညျး မိုကျကယျက အတငျး အကွမျးမဖကျပါဘူး ။
သူက မစေိမျး စိတျဆိုး စိတျကှကျသှားမှာကိုတော့ မလိုလားဘူးလေ ။ ခြောငျးသာမှာ ဂဏနျးဟငျး ပုဇှနျဟငျးနဲ့ ထမငျး စားလိုကျကွ….ကာမပှဲလေးတှေ ကွမျးလိုကျကွနဲ့ ကမ်ဘာလောကကွီးမှာ သူနဲ့ ကိုယျဘဲ ရှိနတေယျလို့ မှတျယူထားကွသညျ ။ မစေိမျးရဲ့ ပါးစပျတှေ ညောငျးလာ နှုတျခမျးတှေ ထူပူလာတဲ့အထိ မိုကျကယျ့ကို ပုလှမှေုတျပေးခဲ့ပွီးပွီ ။ သူ့အတနျကွီးကို စှဲစှဲမကျမကျ အကွိမျကွိမျ မှုတျခဲ့သညျ ။ တခြို့အကွိမျတှမှော မိုကျကယျသညျမစေိမျးရဲ့ပါးစပျထဲမှာ သုတျရညျတှေ ပနျးထုတျပွီး ပွီးခဲ့သညျ ။ မိုကျကယျကလညျး မစေိမျးကို ဘာဂြာ အပွတျဆှဲပေးတာ အကွိမျကွိမျဘဲ ။ ဦးဗလမောငျတငျက မစေိမျးနဲ့ မအိပျတာ ကွာပွီ ။
မစေိမျးက လညျး သူနဲ့ မအိပျခငျြတော့ပါဘူး ။ အခု မိုကျကယျနဲ့ လုပျတော့မှ မစေိမျး ဦးဗလမောငျတငျ နဲ့ မအိပျခငျြတော့တာ မမှာဘူး ဆိုတာ သခြောသှားသညျ ။ တခွားစီဘဲလေ ။ အသကျနှဈဆယျစှနျးစှနျး အားကောငျးတဲ့ လူငယျလေး တယောကျ လုပျပေးတာတှနေဲ့ အသကျ ခွောကျဆယျလောကျ ဘဲအိုကွီး လုပျတာက ကှာတာပေါ့ ။ ညနစော စားပွီးကွတဲ့ အခြိနျ မစေိမျးရဲ့စိတျထဲမှာ နဝေငျခါနီး ပငျလယျကမျးစပျ တလြောကျက သဲပွငျလေးပျေါမှာ လမျးလြောကျခငျြတဲ့ စိတျ ပေါကျလာတာနဲ့ မိုကျကယျနဲ့ ဟိုတယျထဲကနေ ထှကျခဲ့သညျ ။ မိုကျကယျက “ မမ..မမကို တခု မေးလို့ရမလားဟငျ ” လို့ စကားစလိုကျသညျ ။ “ မေးလေ..ဘာလဲ….” “ မမဘဲကွီးနဲ့ မမက တကယျ ပွတျသှားကွပွီလား…..တရားဝငျလေ….”
“ ဟငျ့အငျး ….တရားဝငျတော့ မပွတျကွသေးပါဘူး…..” “သူက အခု ဘယျမှာလဲဟငျ…မမ….” “ သူက အခု ပတျတရာ မှာလို့ ပွောတာဘဲ…..” “ ဟို မငျးသမီးလေးနဲ့လား…” “ အငျး..ဒါဘဲပေါ့…..” “ အံ့သွတယျဗြာ..ဒီလောကျ စိုစိုပွပွေနေဲ့ ခြောတဲ့ မိနျးမ ရှိရဲ့သားနဲ့မြား…ဇာတျလမျးသဈ ရှုပျရတယျလို့ဗြာ…” မိုကျကယျက မစေိမျးကို တခြိနျလုံး ပငျ့မွှောကျလိုကျ ဖါးလိုကျ လုပျနသေညျ ။ “ ကနြျောတော့ မမသာ ခှငျ့ပွုရငျ မမကို လကျထပျပွီး တသကျလုံး အခုလိုဘဲ ခဈြနခေငျြတယျ….” မစေိမျးလညျး ဒီကောငျလေးကို မုနျ့ဖိုးတှေ ပေး…အဝတျအစားတှေ ဝယျပေးသညျ ။ မိုကျကယျနဲ့ မစေိမျး လကျခငျြး တှဲလို့ သဲစိုစိုပျေါ နငျးလြောကျနကွေစဉျမှာဘဲ အမှောငျထုက ပငျလယျကမျးစပျ တခလုံးကို လှမျးခွုံသှားပွီ ။
မိုကျကယျက လကျခငျြး ဆုပျကိုငျထားရာက မစေိမျးရဲ့ ခါးကို ဖကျလိုကျသညျ ။ “ ခဈြတယျ..မမရယျ….” “ ပိုပွီကှယျ..မိုကျကယျ….” “ တကယျပါ မမရဲ့…” မစေိမျးရဲ့ တငျပါးအိအိတှကေို မိုကျကယျက ဆုပျညှဈလိုကျသညျ ။ ဟိုတယျကို အပွနျလမျးမှာ အုနျးတောလေးကို ဖွတျကွရသညျ ။ အုနျးတောထဲမှာ မှောငျနသေညျ ။ မိုကျကယျက မစေိမျးကို ဖကျပွီး အုနျးပငျတပငျရဲ့ ပငျစညျမှာ မှီခလြိုကျသညျ ။ “ ဟိတျကောငျလေး..လူတှေ မွငျကုနျမယျနျော…” “ မမွငျပါဘူး..မမ…မှောငျမဲနတေယျ….” မိုကျကယျ့နှုတျခမျးတှကေ မစေိမျးရဲ့ နှုတျခမျးထူထူပွဲပွဲတှကေို ငုံစုတျလိုကျသညျ ။ သူ့လကျတှကေလညျး မစေိမျး တငျပါးကွီးတှကေို ပယျပယျနယျနယျ ကိုငျတှယျနသေညျ ။ နှဈယောကျစလုံး စိတျတှေ ပွနျထကွှနပွေီ ။
မစေိမျး ဝတျထားတဲ့ စကပျကို မိုကျကယျက လှနျတငျလိုကျပွီး သူ့မြှော့ကွိုးတပျ အားကစား ဘောငျးဘီပှကို လြော့ခလြိုကျသညျ ။မာထောငျနတေဲ့ သူ့လိငျတနျ ရှညျလမြောကွီိးကို အရငျးက ဆုပျကိုငျပွီး မစေိမျးရဲ့ အင်ျဂါစပျပေါကျမှာ တလေို့ကျသညျ ။ မစေိမျး ဝတျထားတဲ့ ဘလောကျဈပှပှကွီးကိုလညျး သူ လှနျတငျလိုကျပွီး ဖှံ့ဖွိုးထောငျကွှနတေဲ့ ရငျသားကွီးတှကေို သူ့လကျတှနေဲ့ ဆုပျညှဈလိုကျတဲ့အခြိနျ မှာ သူ့လိငျတနျကို ကော့ထိုး သှငျးထညျ့လိုကျသညျ ။ “ အီး….အားအား…..” တထဈထဈနဲ့ ဗဈြကနဲ ဝငျသှားတဲ့ လိငျတနျကွီးက မစေိမျးအထဲမှာ ပွညျ့တငျးတငျးကွီး ။ ရငျသီးမာမာထောငျထောငျလေး တလုံးကို မိုကျကယျ ငုံဟတျလိုကျပွီး ကော့ကော့ညှောငျ့ပွီ ။ “ အိုး….အား….အားတစှပျစှပျနဲ့ ဆကျတိုကျ ဝငျထှကျနတေဲ့ မိုကျကယျ့ လိငျတနျကွီးက လုံးပတျက တုတျသညျ ။ ရှညျလညျး ရှညျသညျ ။
မစေိမျး အီဆိမျ့နအေောငျ ကောငျးနသေညျ ။ တဖပျဖပျ အသံတှေ နဲ့ မစေိမျးရဲ့ ညညျးသံက အမှောငျထဲမှာ ခပျတိုးတိုး ထှကျနသေညျ ။ “ ကောငျးလား..မမ…” “ အငျး..အငျး….ကောငျးတယျ….အရမျး…” မိုကျကယျသညျ ဟိုတယျထဲမှာ လုပျလို့ ရရဲ့သားနဲ့ အပွငျမှာ လုပျခငျြသညျ ။ မစေိမျးရဲ့ ခွထေောငျတဖကျကို ဆှဲမပွီး ဖိဆောငျ့နသေညျ ။ သူ့ဆောငျ့ခကျြတှကေ အားပါသညျ ။ တအား အသားကုနျ ။ မစေိမျး သူ့ကို တအား ဖကျပွီး ပွီးသှားသညျ ။ “ အား….အား…….အား………အမလေး……” မိုကျကယျလညျး သူ့လိငျတနျကို မစေိမျး အင်ျဂါစပျထဲက ဇှပျကနဲ ဆှဲထုတျလိုကျသညျ ။ မစေိမျး ဟာတာတာကွီး ဖွဈသှားသညျ ။ မိုကျကယျက မစေိမျး ရဲ. ပုခုံးကို လကျနဲ့ နှိမျ့ခပြွီး သူ့ရှမှေ့ာ ထိုငျခခြိုငျးလိုကျသညျ ။ မစေိမျးသိသညျ ။ သူ့လီးကို စုတျစခေငျြတာ ။ မစေိမျးလညျး အားရပါးရ စုတျပဈလိုကျသညျ ။ “ အား…အား…..အား…..” မိုကျကယျရဲ့ သုတျရညျတှေ တဖတျြဖတျြနဲ့ မစေိမျးရဲ့ ပါးစပျထဲကို ပနျးထုတျလိုကျသညျ ။ မစေိမျးလညျး တကှပျကှပျနဲ့ မွိုခပြဈလိုကျသညျ ။ “ ကောငျးလိုကျတာ….မမ ရယျ…..ပွီး။
မေစိမ်းသည် ညီမ အငယ်ဆုံး မေညို က သူ့ယောက်ျား ဦးဆန်နီကြီးက ပန်းသေနေတာမို့ သူနဲ့ မအိပ်တာ ကြာပြီ ဆိုပြီး ညည်းပြခဲ့ဘူးသလို ညီမ အလတ် မေနှောင်း ရဲ့ ယောက်ျား သက်ထွေးအောင်က မေနှောင်းက သူ နဲ့ မအိပ်တော့တာ ကြာပြီလို့ ပြောပြတာကိုလည်း ကြားခဲ့ရသည် ။ မေစိမ်းလည်း မအံ့သြပါဘူး ။ လူတွေ အသီးသီးဟာ ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းနဲ့ ကိုယ် ရှိနေကြတာဘဲလေ ။ လူတွေက ကိုယ့်အတွင်းရေးကို ထုတ်မပြောကြလို့ပါ ။ သူ့ဟာနဲ့သူ အခက်အခဲတွေ ရှိကြစမြဲပါ ။ မေစိမ်း ဆိုရင်လည်း ယောက်ျား ဦးဗလမောင်တင်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို နေ့မအိပ်ညမအိပ် ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ခဲ့ကြတာ တော်တော်လေး ကြီးပွားလာခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုရမယ့်အချိန် ဦးဗလမောင်တင်သည် ဇာတိပြလာသည် ။
မေစိမ်းက အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတဲ့အချိန် သူက သမီးအရွယ် မော်ဒယ်လေးတွေနဲ့ ကွယ်ရာမှာ ကဲနေ သည်။ အစပိုင်းမှာ မေစိမ်း မသိခဲ့ ။ သူက နံမည်ကြီးခါစ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို မင်းသမီးလေး တယောက်ကို စွဲလန်းသွားခဲ့ပြီး သိန်းတသောင်းခွဲတန် တိုက်တလုံးကို ဝယ်ပေးလိုက်တော့မှ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နံမည်ကြီး သတင်းကြီးသွားပြီး မေစိမ်း သိသွားရသည် ။ မေစိမ်းနဲ့ ဦးဗလမောင်တင်နဲ့လည်း အိမ်ထောင်သက် ကြာလာပြီး သားတွေ သမီးတွေလည်း ကြီးလာကြတဲ့အ ချိန် လင်မယား အတူတူ တကုတင်ထဲ အိပ်ကြပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံတာ မရှိတော့တာ ကြာခဲ့ပြီလေ ။
ယောက်ျားတွေဟာ ဖွဲတဆုပ်နိုင်တဲ့အထိ ကာမရာဂစိတ်တွေ ရှိကြသည် လို့ စာတွေမှာ ရေးကြတာကို ဖတ်ဖူးခဲ့ရတော့ အသက် ၆၀ကျော်အရွယ် သန်တုံးမြန်တုံး ဦးဗလမောင်တင်သည် ကာမဆာလောင်မွတ်သိပ်တဲ့ ဒါဏ် ကို မခံနိုင်ဘဲ ငယ်ရွယ်တဲ့ နုပျိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ရှုပ်တော့တာပေါ့ ။ သူလို အဖိုးကြီးက ရုပ်လည်း ပြမစား နိုင်တော့ ငွေနဲ့ဘဲ ပေါက်ရတော့တာပေါ့ ။ အရေးထဲ ဘော်ဒါတွေကို ကြွားလုံးကလည်း ထုတ်ချင်တော့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ဆင်းရဲသူလေး တယောက်ကို နည်းနည်းပါးပါးနဲ့ ကီပင် လုပ်ထားနိုင်ရက်နဲ့ လူသိများတဲ့ နံမည်ရခါစ မင်းသမီးကို သွားလုပ်တော့ ငွေတွေ သန်းပေါင်းများစွာ ပုံပေးရတော့တယ်လေ ။
မေစိမ်းလည်း သူ့ကို ကောင်းကောင်း ဆဲပစ်ခဲ့သည် ။ “ စောက်ပတ်ဟာ စောက်ပတ်ပါ..ကိုဗလ…ရှင် သိန်းတသောင်းကျော် ရင်းစရာ မလိုပါဘူး.. ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ မိန်းကလေးတွေထဲမှာ တော်ရုံနဲ့ ခေါ်အိပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေ အများကြီး ရှိတယ်…စော်ရူးကြီး…တော်ရုံဘဲရုးဖို့ကောင်းတယ်…ရှင်ကငွေတွေ ဒီလို ပုံပေးရအောင် အဲ့ကောင်မ စောက်ပတ်က ဘာများ ထူးနေလို့လဲ..အရူးကြီးရဲ့…..” ဦးဗလမောင်တင် တင် သားသမီးတွေ ရှေ့ အိမ်အကူတွေ ရှေ့မှာ အဲလို အဆဲခံရတော့ တအား ရှက်သွားသည်။ မေစိမ်းတို့ လင်မယား ကွဲသလိုတောင် ဖြစ်သွားသည် ။
ဦးဗလမောင်တင် လည်း မင်းသမီးလေးနဲ့ အတိအလင်း သွားနေလိုက်သည် ။ မေစိမ်းလည်း သူနဲ့ တရားဝင်ကွဲဖို့က ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ခွဲကြဖို့က ရုတ်တရက် မလွယ်သေးတာကြောင့် မေစိမ်းနဲ့ လက်ရှိ လုပ်ငန်းတွေကို သားကြီး အကူအညီနဲ့ ဆက် လုပ်နေသည် ။ မေစိမ်းလည်း အသက် ငါးဆယ်ကျော်လာတော့ လိင်ကိစ္စကို အားအရမ်းနည်းလာခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် တခါတခါတော့ စိတ်ထတာ ရှိတာပေါ့ ။ ဦးဗလမောင်တင်က ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမဲ့ပြီး သူ လုပ်ချင်တာ လုပ်တော့ စိတ်ထဲမှာ မခံချင်စိတ် ဖြစ်မိသလို အိုးရွဲ့ရင် စလောင်းလည်း ရွဲ့မယ် ဆိုသလို သူ့ကို အရွဲ့တိုက်ချင်မိခဲ့သည် ။ မေစိမ်း လည်း မေစိမ်း သွားနေကျ ဂျင်မ်က ထရိန်နာ ချာတိတ်ကောင်လေးကို ကြည့်ပြီး စိတ်လာမိသည် ။
ကောင်လေးက အားကစား သမားလေးမို့ ကိုယ်လုံး အဆက်အပေါက်က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ယောက်ျား ပီသလွန်းနေတော့ အရင်ထဲက သူ့ကို ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်မိခဲ့တာပေါ့ ။ နောက်ပိုင်း သူက အန်တီ အရွယ်ကြီးကို မမ မမနဲ့ တအားဖါးတော့ သူနဲ့ စကားပြောရတာကို သာယာမိခဲ့သည် ။ ဦးဗလမောင်တင် ကလည်းထင်ရာဆိုင်းသွားတော့ သူတောင် လုပ်သေးတာ ငါက ဘာလို့ လုပ်လို့ မရလဲ ဆိုတဲ့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ဒီ မိုက်ကယ် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ နည်းပြ အကြံပေးမှုတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ် အစားလည်း လျော့တော့ မေစိမ်းလည်း ဝိတ်တွေ ကျပြီး တော်တော်ဘဲ ကြည့်ကောင်းလာသည် ။ မိုက်ကယ်ကလည်း မေစိမ်းက အရမ်းနုတယ်ဘာညာနဲ့ ပင့်ပေး မြှောက်ပေးသည် ။
မေစိမ်းလည်း မိုက်ကယ်ကို စိတ်ယိုင်ပြီး မတွေ့ဘဲ မနေနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာသည် ။ လူချင်းတော့ ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး ။ ဂျင်မ်ကနေ အပြန်မှာ သူနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည် အတူတူ သွားသောက်ကြ….ဆိုင်မှာ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း အပြန်အလှန် ပြောပြကြနဲ့ ရင်းနှီးသထက် ရင်းနှီးလာခဲ့ကြတာပေါ့ ။ တနေ့ အလုပ်မှာ သားကြီးက သူ့အဖေ ဦးဗလမောင်တင် တယောက် ထိုင်းနိုငငံ ဖူခက် ကမ်းခြေမှာ ဟို မင်းသမီးလေးနဲ့ အရှက်မရှိ ကဲပြနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို လာပြသည် ။ သားကြီးကတော့ သူ့အဖေ လုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်ပေမယ့် သိပ်ပြီး စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံတော့ မရှိပါဘူး ။ မေစိမ်းကတော့ တော်တော့်ကို ခံပြင်းသွားခဲ့သည် ။ နောက်တနေ့မှာ မိုက်ကယ်ကို မမနဲ့ လျောက်လိုက်နိုင်မလား လို့ မေးလိုက်တော့ မိုက်ကယ်က မမနဲ့သာဆိုရင် ဘယ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်မယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ မေစိမ်းလည်း အရမ်း သဘောကျသွားပြီး ဂျင်မ်က အပြန် ချောင်းသာကမ်းခြေကို သူနဲ့ ထွက်သွားလိုက်ကြသည် ။ အိမ်ကိုတော့ အလုပ်တွေ ရှိလို့ နေပြည်တော်ကို သွားမယ် လို့ ဖုန်းဆက် ပြောလိုက်တာပေါ့ ။
မေစိမ်းလည်း အိမ်ထောင်ကျ ပြီးမှ စိတ်တွေ ပထမဆုံးအကြိမ် တအားတအား ပြန်ထကြွတာ…။ ကားထဲမှာ မိုက်ကယ်နဲ့ လက်ချင်း ပွတ်သပ် ဆုပ်ကိုင်ကြတာနဲ့တင် မေစိမ်း အရည်တွေ ရွှဲနေပြီလေ ။ မိုက်ကယ်ကလည်း မေစိမ်းက သူ့အတွက် ဖုန်းဝယ်ပေး လက်တော့ ဝယ်ပေး နောက်ဆုံးပေါ် အားကစား ဝတ်စုံတွေ ဝယ်ဆင်နေလို့ မေစိမ်းကို တအား ပင့်မြှောက်သလို မေစိမ်း စိတ်ကြွအောင်လည်း ဟိုကိုင်ဒီပွတ် နဲ့ ဆိုတော့ ချောင်းသာကိုလည်း ရောက်ရော ဟိုတယ် အခန်း ယူလိုက်ကြပြီး အခန်းထဲ ဝင်တယ် ဆိုတာနဲ့ မိုက်ကယ်နဲ့ မေစိမ်း အငမ်းမရကို ဗျင်းကြတော့တာဘဲ ။ ဦးဗလမောင်တင် လို ဘိုက်ပူပူ ခါးကုန်းကုန်း ဘဲကြီးနဲ့ စာမလိပ် စိတ်မလာ သလောက် မိုက်ကယ်လို သန်သန် မာမာ လူငယ်လေးနဲ့ တွေ့ကြပြီ ဆိုတော့ မေစိမ်းလည်း အရမ်းကို စိတ်တွေ ထန်ပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်တွေ ဖြစ်သွားရသည် ။ သူက အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်တာနဲ့ ဦးဗလမောင်တင်လို ပုံပျက်ကြီး မဟုတ်တော့ မေစိမ်း တကယ့်ကို ကြွေသွား ပြီး သူ့ရှည်လမျော တုတ်တုတ်ကြီးကို ရေလည်ဘဲ မှုတ်ပေးမိလိုက်သည် ။
မိုက်ကယ်ဟာ ရုပ်ကလေး သနားကမားနဲ့ ပါးစပ်က တော်တော် ကြမ်းသည် ။ “ တောက်..ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်…ရှီး…….မမ စောက်ပတ်ကို သွားလေရာ တပါထဲ ခေါ်သွားချင်တယ်..မမ ရယ်…လှလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်….ကျနော် စားမယ်နော်…..” ဆိုပြီး တတွတ်တွတ်နဲ့ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေ ပြောဆိုပြီး စောက်ပတ်ကို ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ်နဲ့ စအိုပေါက်ကို မျက်စောင်းထိုးနေသည် ။ ဒေါ်ဂီ စတိုင် လုပ်နေတဲ့ အချိန် သူ့လက်မက မေစိမ်းရဲ့ စအိုပေါက်လေးကို မသိမသာနဲ့ ကလိနေသည် ။ “ ဟိတ် မိုက်ကယ်….အနောက်ပေါက်တော့ မလုပ်နဲ့ကွယ်…တော်ကြာ မမ နောက်ပေါက် ကွဲသွားလို့ လမ်းလျောက်လို့ မရဘဲ အရှက်ကွဲနေအုံးမယ်…..” ဒီလို ပြောလိုက်တော့လည်း မိုက်ကယ်က အတင်း အကြမ်းမဖက်ပါဘူး ။
သူက မေစိမ်း စိတ်ဆိုး စိတ်ကွက်သွားမှာကိုတော့ မလိုလားဘူးလေ ။ ချောင်းသာမှာ ဂဏန်းဟင်း ပုဇွန်ဟင်းနဲ့ ထမင်း စားလိုက်ကြ….ကာမပွဲလေးတွေ ကြမ်းလိုက်ကြနဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ သူနဲ့ ကိုယ်ဘဲ ရှိနေတယ်လို့ မှတ်ယူထားကြသည် ။ မေစိမ်းရဲ့ ပါးစပ်တွေ ညောင်းလာ နှုတ်ခမ်းတွေ ထူပူလာတဲ့အထိ မိုက်ကယ့်ကို ပုလွေမှုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ ။ သူ့အတန်ကြီးကို စွဲစွဲမက်မက် အကြိမ်ကြိမ် မှုတ်ခဲ့သည် ။ တချို့အကြိမ်တွေမှာ မိုက်ကယ်သည်မေစိမ်းရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပြီး ပြီးခဲ့သည် ။ မိုက်ကယ်ကလည်း မေစိမ်းကို ဘာဂျာ အပြတ်ဆွဲပေးတာ အကြိမ်ကြိမ်ဘဲ ။ ဦးဗလမောင်တင်က မေစိမ်းနဲ့ မအိပ်တာ ကြာပြီ ။
မေစိမ်းက လည်း သူနဲ့ မအိပ်ချင်တော့ပါဘူး ။ အခု မိုက်ကယ်နဲ့ လုပ်တော့မှ မေစိမ်း ဦးဗလမောင်တင် နဲ့ မအိပ်ချင်တော့တာ မမှာဘူး ဆိုတာ သေချာသွားသည် ။ တခြားစီဘဲလေ ။ အသက်နှစ်ဆယ်စွန်းစွန်း အားကောင်းတဲ့ လူငယ်လေး တယောက် လုပ်ပေးတာတွေနဲ့ အသက် ခြောက်ဆယ်လောက် ဘဲအိုကြီး လုပ်တာက ကွာတာပေါ့ ။ ညနေစာ စားပြီးကြတဲ့ အချိန် မေစိမ်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ နေဝင်ခါနီး ပင်လယ်ကမ်းစပ် တလျောက်က သဲပြင်လေးပေါ်မှာ လမ်းလျောက်ချင်တဲ့ စိတ် ပေါက်လာတာနဲ့ မိုက်ကယ်နဲ့ ဟိုတယ်ထဲကနေ ထွက်ခဲ့သည် ။ မိုက်ကယ်က “ မမ..မမကို တခု မေးလို့ရမလားဟင် ” လို့ စကားစလိုက်သည် ။ “ မေးလေ..ဘာလဲ….” “ မမဘဲကြီးနဲ့ မမက တကယ် ပြတ်သွားကြပြီလား…..တရားဝင်လေ….”
“ ဟင့်အင်း ….တရားဝင်တော့ မပြတ်ကြသေးပါဘူး…..” “သူက အခု ဘယ်မှာလဲဟင်…မမ….” “ သူက အခု ပတ်တရာ မှာလို့ ပြောတာဘဲ…..” “ ဟို မင်းသမီးလေးနဲ့လား…” “ အင်း..ဒါဘဲပေါ့…..” “ အံ့သြတယ်ဗျာ..ဒီလောက် စိုစိုပြေပြေနဲ့ ချောတဲ့ မိန်းမ ရှိရဲ့သားနဲ့များ…ဇာတ်လမ်းသစ် ရှုပ်ရတယ်လို့ဗျာ…” မိုက်ကယ်က မေစိမ်းကို တချိန်လုံး ပင့်မြှောက်လိုက် ဖါးလိုက် လုပ်နေသည် ။ “ ကျနော်တော့ မမသာ ခွင့်ပြုရင် မမကို လက်ထပ်ပြီး တသက်လုံး အခုလိုဘဲ ချစ်နေချင်တယ်….” မေစိမ်းလည်း ဒီကောင်လေးကို မုန့်ဖိုးတွေ ပေး…အဝတ်အစားတွေ ဝယ်ပေးသည် ။ မိုက်ကယ်နဲ့ မေစိမ်း လက်ချင်း တွဲလို့ သဲစိုစိုပေါ် နင်းလျောက်နေကြစဉ်မှာဘဲ အမှောင်ထုက ပင်လယ်ကမ်းစပ် တခလုံးကို လွှမ်းခြုံသွားပြီ ။
မိုက်ကယ်က လက်ချင်း ဆုပ်ကိုင်ထားရာက မေစိမ်းရဲ့ ခါးကို ဖက်လိုက်သည် ။ “ ချစ်တယ်..မမရယ်….” “ ပိုပြီကွယ်..မိုက်ကယ်….” “ တကယ်ပါ မမရဲ့…” မေစိမ်းရဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို မိုက်ကယ်က ဆုပ်ညှစ်လိုက်သည် ။ ဟိုတယ်ကို အပြန်လမ်းမှာ အုန်းတောလေးကို ဖြတ်ကြရသည် ။ အုန်းတောထဲမှာ မှောင်နေသည် ။ မိုက်ကယ်က မေစိမ်းကို ဖက်ပြီး အုန်းပင်တပင်ရဲ့ ပင်စည်မှာ မှီချလိုက်သည် ။ “ ဟိတ်ကောင်လေး..လူတွေ မြင်ကုန်မယ်နော်…” “ မမြင်ပါဘူး..မမ…မှောင်မဲနေတယ်….” မိုက်ကယ့်နှုတ်ခမ်းတွေက မေစိမ်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲတွေကို ငုံစုတ်လိုက်သည် ။ သူ့လက်တွေကလည်း မေစိမ်း တင်ပါးကြီးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်တွယ်နေသည် ။ နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်တွေ ပြန်ထကြွနေပြီ ။
မေစိမ်း ဝတ်ထားတဲ့ စကပ်ကို မိုက်ကယ်က လှန်တင်လိုက်ပြီး သူ့မျှော့ကြိုးတပ် အားကစား ဘောင်းဘီပွကို လျော့ချလိုက်သည် ။မာထောင်နေတဲ့ သူ့လိင်တန် ရှည်လမျောကြီိးကို အရင်းက ဆုပ်ကိုင်ပြီး မေစိမ်းရဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်မှာ တေ့လိုက်သည် ။ မေစိမ်း ဝတ်ထားတဲ့ ဘလောက်စ်ပွပွကြီးကိုလည်း သူ လှန်တင်လိုက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးထောင်ကြွနေတဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို သူ့လက်တွေနဲ့ ဆုပ်ညှစ်လိုက်တဲ့အချိန် မှာ သူ့လိင်တန်ကို ကော့ထိုး သွင်းထည့်လိုက်သည် ။ “ အီး….အားအား…..” တထစ်ထစ်နဲ့ ဗျစ်ကနဲ ဝင်သွားတဲ့ လိင်တန်ကြီးက မေစိမ်းအထဲမှာ ပြည့်တင်းတင်းကြီး ။ ရင်သီးမာမာထောင်ထောင်လေး တလုံးကို မိုက်ကယ် ငုံဟတ်လိုက်ပြီး ကော့ကော့ညှောင့်ပြီ ။ “ အိုး….အား….အားတစွပ်စွပ်နဲ့ ဆက်တိုက် ဝင်ထွက်နေတဲ့ မိုက်ကယ့် လိင်တန်ကြီးက လုံးပတ်က တုတ်သည် ။ ရှည်လည်း ရှည်သည် ။
မေစိမ်း အီဆိမ့်နေအောင် ကောင်းနေသည် ။ တဖပ်ဖပ် အသံတွေ နဲ့ မေစိမ်းရဲ့ ညည်းသံက အမှောင်ထဲမှာ ခပ်တိုးတိုး ထွက်နေသည် ။ “ ကောင်းလား..မမ…” “ အင်း..အင်း….ကောင်းတယ်….အရမ်း…” မိုက်ကယ်သည် ဟိုတယ်ထဲမှာ လုပ်လို့ ရရဲ့သားနဲ့ အပြင်မှာ လုပ်ချင်သည် ။ မေစိမ်းရဲ့ ခြေထောင်တဖက်ကို ဆွဲမပြီး ဖိဆောင့်နေသည် ။ သူ့ဆောင့်ချက်တွေက အားပါသည် ။ တအား အသားကုန် ။ မေစိမ်း သူ့ကို တအား ဖက်ပြီး ပြီးသွားသည် ။ “ အား….အား…….အား………အမလေး……” မိုက်ကယ်လည်း သူ့လိင်တန်ကို မေစိမ်း အင်္ဂါစပ်ထဲက ဇွပ်ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ မေစိမ်း ဟာတာတာကြီး ဖြစ်သွားသည် ။ မိုက်ကယ်က မေစိမ်း ရဲ. ပုခုံးကို လက်နဲ့ နှိမ့်ချပြီး သူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ချခိုင်းလိုက်သည် ။ မေစိမ်းသိသည် ။ သူ့လီးကို စုတ်စေချင်တာ ။ မေစိမ်းလည်း အားရပါးရ စုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ “ အား…အား…..အား…..” မိုက်ကယ်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ မေစိမ်းရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်သည် ။ မေစိမ်းလည်း တကွပ်ကွပ်နဲ့ မြိုချပစ်လိုက်သည် ။ “ ကောင်းလိုက်တာ….မမ ရယ်…..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မမရယျ